प्रदेश तीनको नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गरिदै, के छन् नयाँ कार्यक्रम ? - Arthakoartha.com
तीन नम्बर प्रदेशको सरकारले आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ नीति प्रदेश सरकारो नीति कार्यक्रमा सार्वजनिक गर्दं छ । प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्ने प्रदेशको नीति कार्यक्रमा मुख्यतया भुकम्प पछिको पुन: निर्माणलाइ विशष प्राथामिकतामा राखेर कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरिदै छ । प्रदेश नं. ३ का प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाले शुक्रबार प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुने भएको छ । नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले विहिवार नै पारित गरेको मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव रेशमीराज पाण्डेले बताएका छन् ।
प्रदेश तीन २०७२ मा गएको महाभुकम्पबाट बढी प्रभावित क्षेत्र हो । यस प्रदेशमा पर्ने अधिकाश जिल्लाहरु भुकम्पले पुर्याएको क्षतिबाट अझै तग्रिन सकेका छैनन । अझै पनि लाखौ नागरिक टहरामा बास बस्न बाध्य भइरहेका समयममा नीति कार्यक्रमले भुकम्प पछिको पुन निर्माणलाइ विशेष प्राथामिकतामा राख्ने भएको छ । जस अनुशार एकिकृत बस्ती निर्माण हरेक स्थानीय तहमा विवद ब्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गर्ने कार्यक्रम आगाडी सारिने भएको छ । यस्तै प्रत्येक स्थानीय तहमा मनोरंजनपार्क वलाउ उद्यान केन्द्र निर्माण गरिने छ ।
के कार्यक्रम ल्याइदै छ
यो बर्ष उद्योग बर्षको रुपमा मनाइने । उद्योग दर्तमा विषेश कार्यक्रमा हेटौडालाई औद्योगिक केन्द्रको रुपमा विकास गरि आर्थिक हवो रुपमा विकास गरिने । सुनकुशी हाइड्रो तामकोशी तेस्रो जलविधुत आयोजना निर्माणमा कार्यक्रमले विशेष जोड दिने छ । दुइ बर्ष भित्र प्रदेशलाइ आधारभुत खाध्यन्यमा आत्म निर्भर गाराइने । कृषि एव पशु विमालाइ बढी प्रथामिकता राखिएको छ । काठमाडौको बौद्धबाट नगरकोट काशि खण्ड र नमोबुद्ध हुँदै तम्सोङ्ग कुण्ड लामटार वा फुलचोकी हुदै नारायणथान नागरकोट बुद्ध सर्किटको निर्माण लगायतका विषय नयाँ कार्यक्रमले समेटने छ । प्रदेश भित्र ५ बर्ष भित्र सुद्ध पिउने पानिको ब्यवस्था हेटौडा चितवन लगायका जिल्लामा चक्रपथको निर्माण गर्ने विषय प्रदेश सरकारका योजना तथा नीति कार्यक्रमले समेटने छ ।
हरेक जिल्लाका मुख्य बजार क्षेत्रमा बहुतले ब्यवसायी भवन निर्माण, नयाँ सहर निर्माण हरेक जिल्लामा अत्याधुनिक बष टर्मिनल निर्माण, अटो भिलेजको निर्माण कोर सिटि र हाउस पुलिङको योजना स्थानीय कला एव संस्कृति केन्द्रको निर्माण ,यसै गरी रामेछापको तामेडाँडामा चारा अवलोकन केन्द्र, शैलुङ्ग जैविक मार्ग निर्माण माहाभारत पर्वतिय मार्ग जलाधार क्षेत्र संरक्षण र पर्यटन प्रवृद्धनका कार्यक्रमहरु आउदैछन् । सहकारीमार्फत रोजगारी सृर्जना गर्ने लक्षित कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रमा समेटिने भएको छ ।
नबिल बैंक र हिमालयन बैंकले पनि निक्षेपमा ब्याजदर बढाएपछि राष्ट्र बैक तनावमा
एनएमबि र ओम बैंकलाई गाभिन राष्ट्र बैंकको स्वीकृति